Ò Nwere Ihe Dị Njọ n’Ịchụ Nwoke Ma Ọ Bụ Nwaanyị? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bulgarian Catalan Cebuano Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Ndau Norwegian Nyungwe Nzema Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị bụ ịchụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị?
Gịnị mere ụfọdụ ndị ji eme ya?
Gịnị ka ọ na-akpata?
Ụfọdụ ndị chere na ịchụ nwoke ma ọ nwaanyị bụ mmadụ ịgwa onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ya na ya nwere mmasị n’ebe ọ nọ, ma ọ bụkwanụ ịkpasowe onye ahụ agwa gosiri na o nwere mmasị n’ebe ọ nọ. Ọ̀ dị njọ mmadụ igosi na ya nwere mmasị n’ebe onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ya nọ? Ọ dịchaghị. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Ann kwuru na ọ bụ ụzọ onye chọrọ ịlụ di ma ọ bụ nwunye si achọpụta ma onye o nwere mmasị n’ebe ọ nọ ò nwekwara mmasị n’ebe yanwa nọ.
Ma n’isiokwu a, ihe anyị ga-atụle bụ mmadụ igosi na ya nwere mmasị n’onye ọ na-ebughi n’obi ịlụ.
Otụ nwa agbọghọ aha ya bụ Deanna kwuru, sị: “O nwere ihe dị iche na mmadụ na-eleru onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ya anya ka ọ mara ma hà nwere ike ịlụ, na mmadụ ịmara ụma na-eme ka à ga-asị na ihe onye ọzọ na-amasị ya ma mechaa kpọpụta onye ahụ n’etiti ụzọ hapụ ya. Nke a nwere ike ime ka obi gbawaa onye o mere ụdị ihe a.”
Ụfọdụ ndị na-eme ya iji gosi ndị ọzọ na ha ga-emeli ya. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Hailey kwuru, sị: “Ị mata na ị ga-emeli ka ndị ọzọ nwee mmasị n’ebe ị nọ, ị ga na-achọkwu ime ya.”
Mana, ime ka i nwere mmasị n’ebe onye ihe ya na-amasịghị gị nọ, na-egosi na i nwere obi ọjọọ, na ị chọghị ịma otú obi ga-adị onye nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ya iji gosi na ị ga-emeli ya, o nwere ike igosi na ị maghị ihe. Baịbụl kwuru, sị: “Nzuzu bụụrụ onye na-enweghị uche ịṅụrị ọṅụ.”​—Ilu 15:21.
Ọ bụ ya mere ihe ọzọ Hailey kwuru ji bụrụ eziokwu. Ọ sịrị: “Mmadụ bido ịchụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, o nwere ike ịdị ya ka ihe na-enweghị ihe o mere, ma ọ na-akpatakarị ọdachi.”
Ọ na-enye mmadụ aha ọjọọ.
Otu nwa okorobịa aha ya bụ Jeremy kwuru, sị: “Ndị mmadụ na-ewerekarị onye na-achụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ka onye na-amaghị ihe, anaghikwa atụkwasị ya obi. A na-ewerekarị ya na ihe mere o ji abịa mmadụ nso bụ n’ihi na o nwere ihe ọ chọrọ irite onye ahụ n’aka.”
Baịbụl kwuru, sị: “Ịhụnanya adịghị . . . achọ ọdịmma nke ya.”​—1 Ndị Kọrịnt 13:4, 5.
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee ihe ọ ga-abụ i mee, ndị mmadụ ewere ya na ị na-achụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị?
Ọ na-eme ka obi gbawaa onye nke ọzọ.
Otu nwaanyị aha ya bụ Jaqueline kwuru, sị: “Anaghị m achọ ka mụ na onye na-achụ nwaanyị na-ekwu okwu. Ọ na-adị m ka naanị ihe mere o ji abịa m nso bụ n’ihi na m bụ nwaanyị. Ụdị ndị a achọghị ịma gbasara onye ọzọ, mkpa ha bụ ihe ga-adị hanwa mma.”
Baịbụl kwuru, sị: “Ka onye ọ bụla na-achọ, ọ bụghị uru nke ya, kama nke onye nke ọzọ.”​—1 Ndị Kọrịnt 10:24.
Ihe ị ga-echebara echiche: Ò nwetụla mgbe ị chere na mmadụ nwere mmasị n’ebe ị nọ, e mechaa gị achọpụta na ihe adịghị otú i si chee ya? Olee otú obi dị gị mgbe ahụ? Gịnị ka ị ga-eme ka ị ghara ime onye ọzọ ụdị ihe ahụ?
Ọ ga-eme ka mmadụ ghara ịma mgbe i nwere mmasị n’eziokwu n’ebe ọ nọ.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Olivia kwuru, sị: “O nweghị onye ga-achọ ka ya na onye na-achụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-akpa ma ya fọdụzie ịlụ ya. Ọ nweghị otú mmadụ ga-esi tụkwasị onye ọ ma na ọ na-akpa ụdị agwa a obi.”
Na Baịbụl, ọbụ abụ bụ́ Devid kwuru, sị: “Mụ na ndị na-ezochi ihe ha bụ adịghị akpakọrịta”—Abụ Ọma 26:4.
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee ụdị onye ihe onye na-achụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-amasị? Ị̀ ga-achọ ka ihe gị na-amasị ụdị onye ahụ?
“Ọ bụrụ na ị na-achụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, ị ga-akpatara ndị ọzọ obi mgbawa, ha agwakwa ndị ọzọ ihe i mere ha. Ị nọgidekwa na-eme ya, aha gị ana-emebi na-aga, ya ana-esikwuru gị ike imezi ya.”​—Scott.
“Ịchụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-eme ka mmadụ nwee aha ọjọọ. Nke bụ́ eziokwu bụ na a naghị atụkwasị onye dị otú ahụ obi. Mụ na ụdị onye a agaghị abụlikwa enyi.”​—Jeslyn.
Ùnu Bụ Naanị Enyi Ka Ị̀ Na-Achụ Nwoke Ma Ọ Bụ Nwaanyị?